Lungiselela isivumelwano sokuxazulula imali? Singakusiza
Umthetho Wezinkampani » Isivumelwano sokuhlala
Isivumelwano sokuxazulula uhlobo olukhethekile lwesivumelwano. Esivumelwaneni sokuxazulula, amaqembu ahlose ukwenza izivumelwano mayelana nokuxazululwa kwengxabano noma esinye isimo esingaqinisekile. Kuyisivumelwano futhi umqashi nabasebenzi abangasisebenzisa ngokuzithandela, ngesivumelwano sobabili, ukuqeda inkontileka yokuqashwa.
QHAFA ISIVUMELWANO SOKUTHENGA?
Isivumelwano sokuxazulula uhlobo olukhethekile lwesivumelwano. Esivumelwaneni sokuxazulula, amaqembu ahlose ukwenza izivumelwano mayelana nokuxazululwa kwengxabano noma esinye isimo esingaqinisekile. Kuyisivumelwano futhi umqashi nabasebenzi abangasisebenzisa ngokuzithandela, ngesivumelwano sobabili, ukuqeda inkontileka yokuqashwa. Isivumelwano sokuxazululwa kungaqedwa ngazo zonke izinhlobo zezingxabano, kepha sivame ukusetshenziswa kakhulu kumacala okuxoshwa.
Yini isivumelwano sokukhokha?
Okuqukethwe kwesivumelwano sokuphelisa
Esivumelwaneni sokuxazulula, imibandela lapho isivumelwano sokuqashwa sipheliswa ngaphansi. Okuqukethwe ngqo kwesivumelwano sokuxazulula kuya ngesimo nezimo ezithile. Kodwa-ke, kukhona izinto ezimbalwa ezihlala zichaziwe. Okokuqala, usuku lokuqedwa kungenye yezinto ezibaluleke kakhulu zesivumelwano sokuxazulula izindleko. Okwesibili, isikhathi sesaziso kufanele sihambisane. Ekugcineni, kufanele kwenziwe izivumelwano maqondana nesikhathi sokusebenza esisele kuze kufike usuku lokuvalwa. Kungenzeka ukuthi isikhathi sokuxolelwa emsebenzini kuvunyelwene ngaso. Kuleso simo, isisebenzi akusafanele sisebenze, kepha ilungelo lakhe lomholo lihlala likhona.
Izivumelwano nazo zingenziwa mayelana nebhalansi yekhefu engeke ihambisane nanoma iyiphi enye indawo yokuhlala, efana nekhomishini, izikimu zebhonasi noma izinhlelo zokwabelana. Ngaphezu kwalokho, inani lesibonelelo sokushintsha esinqunyelwe ekubonisaneni okukhona phakathi komqashi nomsebenzi kuzofakwa kwisivumelwano sokuxazulula izindleko. Inani lemali yesibonelelo sokushintsha livame ukuxoxwa futhi kubaluleke kakhulu. Ngakho-ke, kungaba ukuhlakanipha ukufuna usizo lwezomthetho kule ndaba. Iqembu lethu lingakujabulela ukukusiza.
Imibandela maqondana nesivumelwano sokukhokha
Umsebenzi unelungelo elisemthethweni lokubuyisa isivumelwano sokusayina esisayiniwe kungakapheli amasonto amabili. Umqashi kufanele afake ilungelo lokuhoxiswa kwesivumelwano esivumelwaneni. Ngaphezu kwalokho, lapho isivumelwano sokuqeda imali sesiphelile, kukhishwa ukukhululwa kokugcina phakathi kwamaqembu. Lokhu kusho ukuthi umqashi kanye nomsebenzi ngeke besakwazi ukufaka isimangalo komunye nomunye ngaphandle kwaleyo ebekwe esivumelwaneni sokuxazulula izindleko. Ukunikezwa kokugcina kokukhishwa kuvame ukufakwa ekugcineni kwesivumelwano.
Ilungelo lokuthola inzuzo
Isivumelwano sokuqedwa kwempahla kumele ngaso sonke isikhathi sisho ukuthi umqashi uthathe isinyathelo sokuqeda umsebenzi. Isisebenzi ngeke sisebenze ngokungafanele. Lokhu kubalulekile ukuze isisebenzi sibe nelungelo lokuthola inzuzo yokusebenza. Imibandela elandelayo kumele futhi ihlangatshezwe ukuze kuqinisekiswe ukuthi umsebenzi unelungelo lokuthola imihlomulo yokungasebenzi:
• umqashi acele umsebenzi ukuthi avume ukuxoshwa;
• Isivumelwano sokuqeda imali sibheka isikhathi sesaziso;
• Umsebenzi angakhombisa ukuthi useshonile futhi ufuna umsebenzi omusha.
Iseluleko - ukuxoxisana - ukudweba isivumelwano sokuxazulula izindleko
Iqembu lethu lizokujabulela ukueluleka, ukuxoxisana ngawe nokuthi likutholele yonke isivumelwano sokuhlala. Sikweluleka ngokubaluleka kwesivumelwano sokuxazulula futhi sinikeze ukucaciseleka. Futhi sibheka izifiso zakho ezithile futhi siqinisekise ukuthi ufinyelela esinqumweni esenziwe kahle nesinqunyiwe. Lapho sixoxisana, sikusiza ukuba uthole umphumela omuhle wezezimali ngemibandela emihle